I-China CPLA + i-bamboo ePhilayo esekwe kwiPlanethi engafakwanga isi-6 ye-intshi ye-Cutlery kunye neFektri | Gianty
I-CPLA + I-bamboo esekwe kwizityalo engasetyenziswanga ePlasitiki engenasiseko i-6 intshi
I-crystallized poly-lactic acid, okanye i-CPLA, yipolymer esekwe kwisityalo esetyenzisiweyo kwilindle lethu. Ngokongeza i-bamboo fiber, yenza ukuba i-cutlery ijongeke yendalo kwaye inesitayile. Ukunqunyulwa komzimba kweCPLA komelele kuqinile kwaye yomelele ngokunyamezela okuphezulu kobushushu. I-cutlery engenasiplastiki ingasetyenziselwa iisuphu zeserver, izitya zerayisi, okanye nakuphi na ukutya okuphekiweyo ngaphandle okanye ngaphakathi kwendlu.
Yintoni ebangela ukuba oku kuncothule kubume bendawo?
Izinto ezihlaziyiweyo, ezisekwe kwizityalo ze-CPLA! Ezi zixhobo zithetha ukuba ukunqunyulwa kunokuthengiswa ngokuchanekileyo nangeeveki ezili-12 emva kokuzisebenzisa. Oku kuyakunceda ukhuphe inkunkuma kumhlaba wokugcwalisa komhlaba kwaye endaweni yoko ujike ukusika kwisicompost esicebile esisetyenziselwa ukukhula kwezityalo.
Izinto ezihlaziyiweyo zithetha ukuba i-cutlery ikwindawo entle kakhulu kubutyebi bendalo kunezo zenziwe kwiiplastiki ezisekwe kwioyile. Ke nokuba awukwazi ukubathumela kwiindawo zokwenza umgquba zorhwebo, ukutshintshela kwilize kuya kusinceda ukunciphisa ifuthe lakho kulomhlaba.
Yintoni enye enkulu nge-CPLA?
Njengoko i-CPLA iye yakhalinyelwa ngenxa yamandla ongezelelweyo, ezi zinto zichetyiweyo ziqine ngokwaneleyo ukuze zisetyenziswe ngokutya okune-crunchy ngaphandle kokuqhekeza okanye ukubetha. Izixhobo ze-CPLA zithetha ukuba ii-cutlery zikulungele ukusetyenziswa kumaqondo obushushu ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-85, zibenze ukongezwa okufanelekileyo kukutya okushushu nokubandayo.
Ukunqunyulwa kweCPLA yethu ine-BPI, i-Cost eyi-OK, i-FDA, isiqinisekiso se-SGS, njl. Njl. Ezi ziqinisekiso zibonakalisa amandla acocekileyo kunye nokhuseleko lokudibana.
I-FDA imele uLawulo lokuTya iziyobisi, iqumrhu likarhulumente elinoxanduva lokukhuseleka kokutya, ukutya okongeziweyo, iziyobisi ngabantu, amayeza okutofa, iimveliso zegazi kunye nezinye izinto zebhayoloji, izixhobo zonyango, izixhobo ezikhupha imitha yombane, izimonyo, iimveliso zezilwanyana kunye neemveliso zecuba ezithengiswayo. okanye yenziwe eMelika. I-FDA ikwahlola kwaye inyanzelise imigaqo ephathelele kolu shishino.
• Yenziwe kwi bioplastic esekwe kwisityalo, eveliswa kwisitatshi esivuselelekayo
• Ubushushu kumphezulu wobuso bwi-pearlescent ukuya kuthi ga kwi-85 ℃
• Ukungavunyelwa kwamanzi kunye neoyile-ubungqina ngobunzima obuphezulu
Izixhobo zeCPLA zinokufakwa ngokupheleleyo kwindawo yokuthengisela umgquba kwiintsuku ezili-180
• Ifumaneka ngombala omhlophe, omnyama okanye obenombala, umntu ngamnye osongelwe okanye ongafakwanga
• I-FDA evunyiweyo yokuqhagamshela ukutya ngokuthe ngqo
• Okungakumbi kwaye kunesitayile
Into I-CPLA 6 intshi Knife
Isixhobo I-PLA + i-bamboo fiber
Umbala Mhlophe, Mnyama, Mhlophe
Ubalo lweCarton Ziyi-1000 iipcs
Izinto ngepakethi nganye I-50 ii-pcs
Iipakethi kwinqwelo nganye Iipakethi ezingama-20
Ubungakanani bebhokisi 30 * 17 * 17cm
Into I-CPLA 6 intshi I-Fork
Ubungakanani bebhokisi 34 * 16 * 20cm
Into CPLA 6 intshi Isipuni
Ubungakanani bebhokisi 32.5 * 15 * 23cm
Edlulileyo: I-CPLA + i-bamboo esekwe kwiZityalo engasetyenziswanga ePlasitiki engenasici isi-7 ye-intshi
Okulandelayo: I-CPLA yeplasitiki engenasiseko Sokuphelisa I-Cutlery ekhutshiweyo-Ingxowa yephepha